कोरियामा भिजा सकिन लागेका कामदारहरुको भिजा १ बर्ष थप हुने, हेरौं क कसको थपिन्छ? – Eps Sathi
December 7, 2021 1633
केहि दिन अघि दक्षिण कोरियाका केहि समाचार अनलाईन मेडियाहरुले कामदारहरुो भिजा अवधि थप हुने बारेमा समाचार लेखेसँगै यहाँ रहेका इपिएस कामदारहरु खुशी भएका थिए। उनिहरुले थप १ बर्ष कोरियामा काम गर्न पाउने भन्दै खुशी मनाएका थिए। कोरियामा आउँदो जनवरी १२ तारिख भिजा अबधि सकिन लागेका बागलुङका अमर गुरुङले कोरियाली सरकारले गरेको यो निर्णयको स्वागत गर्दै यसले आफूलाई एकदमै खुशी बनाएको कुरा इपिएस साथीलाई बताए।
Prevकोरियाका मानिसहरु आफूले आफैंलाई किन थप्पड हान्छन? कारण थाहा पाउँदा दुनियाँ चकित
Nextकोरियाबाट अनुहार देखाउन लाज हुने फट्याँइ गरेर भागे भारतिए प्रोफेसर, हेरौं के गरेछन त?